ပြေးလမ်းတစ်ခုပေါ်က ရက်စက်သော ကံကြမ္မာ (ညီမလေး ဖတ်ဖို့ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ပြေးလမ်းတစ်ခုပေါ်က ရက်စက်သော ကံကြမ္မာ (ညီမလေး ဖတ်ဖို့ )
ပြေးလမ်းတစ်ခုပေါ်က ရက်စက်သော ကံကြမ္မာ (ညီမလေး ဖတ်ဖို့ )
Posted by htet way on May 22, 2012 in Community & Society, Editor's Choice, Opinions & Discussion | 59 comments
မိုးက သည်းသည်းမည်းမည်းရွာနေတယ် မေလ လယ်ပေမယ့် မိုးက တစ်နာရီလောက် ပင်လယ် တစ်ခု မှောက်ချ လိုက်သလို ရွာ ချလိုက်တာ ဓနိ မိုး အိမ်လေးတွေ မိုး ယိုလို့ တစ်ချို့ဆို ဓနိဟောင်းလေးတွေ
ကေက်လို့ ပေါ့ အကိုကတော့ လမ်းဘေး လက်ဖက်ရည် ဆိုင်လေးမှာ မိုးကို ငေးလို့ အတွေး နယ်ချဲ့မိတယ်။ ဆရာ သစ္စာနီ ကဗျာ ထဲက လို မိုးကလွဲလို့ အားလုံးနဲ့ လွဲခဲ့ပေါ့ ဆိုသလို လွဲချော် ခြင်းတွေနဲ့ ပေါ့ ညီမလေးရယ်။
အကို က မိုးရေထဲပြေးနေတဲ့ ကလေးတွေကို ကြည့်လို့ ။ကလေးတစ်ယောက်က အိတ်တစ်လုံး လွယ်ပြီး မိုးရေထဲ အဆောင်းမပါဘဲ လျှောက်နေတယ် လက်ထဲမှာ လည်း တုတ် တစ်ချောင်းနဲ့ ရေသန့်ဗူး တွေ့တော့ အားရ၀မ်းသာ ကောက်ထည့်လိုက် ဒန်စလေးတွေ့တော့ ကောက်ထည့်လိုက် ဒီကလေးက သူရှိမှ ခုနှစ်နှစ် အရွယ်ပေါ့ ညီမလေး ။ အကို မျက်ရည် ၀ဲမိပါတယ် အကို့ သား လေးသာ ဆို။
ညီမလေးရေ အသိဥာဏ် ဦးဆောင်တဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ တစ်ယောက်နဲ့ တ်ယောက် မိတ်ဆွေ ရင်းခြာ ဖြစ်ဖို့ ဆို တာ သိပ်မလွယ်လှပါဘူး။ အကို ကတော့ ကံကောင်းထောက်မစွာ မိတ်ဆွေ စစ်တွေ အနည်း ငယ်ရခဲ့တယ်လေ။ ဒီထဲမှာ အာရပ် ပုံပြင်ထဲက ကုလား အုတ်ို ခေါင်းတိုးပြီး ကိုယ်ဝင် နိုင်အောင် အား ထုတ်သူတွေလည်း ကြုံ ခဲ့ရတယ်။ အကို့ ရဲ့ အရှိန် အ၀ါလေးကို ယူပြီး နေရာယူ ကြတဲ့ လူတွေ တွေ့ခဲ့တယ် ။
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပေါ့ တပည့်တစ်ယောက်ဆို ပိုမှန် မယ် ဒီလူငယ်လေးက စာေ၇းဆရာဖြစ်ချင်ရှာတယ် ။တကယ်တော့ စာရေးဆရာဆိုတဲ့ လူတွေဟာ ရိုးသားကြပါတယ်ကွယ်။အကို က ရေးနည်းတွေ သင်ပြ
ဖတ်ညွှန်းတွေပြ ဥပဒေတွေ သင်ပေးနဲ့ အချိန်တော်တေ်ာယူပြီး ပြုစုခဲ့တယ်။ သို့သော် ညီမလေးရေ ကိုယ်စိုက်တဲ့ ပန်းက အဆိပ်ပန်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သတင်းစာ ဆရာ၊ စာရေးဆရာ ဆိုတဲ့ ကဒ်ကို ပြ တောရွာတွေမှာ
လယ်သမားတွေ ဆီက လယ်ယာမြေ ကိစ္စတွေ မကြေလည်မှုတွေ ကိုမေး တိုင်တဲ့ နေရာမှာ ၀င်ပါ ငွေရယူနဲ့ အကိုကတော့ စိုက်ခဲ့တဲ့ ပန်းလေးဟာ အဆိပ်ပွင့် ပွင့်ခဲ့တယ်ကွယ်။အကို ရှက်လိုက်တာလေ။ ညီမလေးရေ စာဝတ်နေရေးကြောင့်လား လောဘကြောင့်လား အဆိပ်ပန်းလေးကို အကို နှမျောမိပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အကို မြင်ကွင်း ထဲကို အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရောက်လာတယ် မိုးရေတွေ ကြားထဲ ဘာကိစ္စအရေးကြီးတယ် မသိဘူး ထီးလေး မလုံ့တစ်လုံနဲ့ ။ ညီမလေးရေ သူမကအကို့ကို နုတ်ဆက်ပါတယ် ရန်ကုန်ရောက်နေတယ်တဲ့ အထည် ချုပ် စက်ရုံ တစ်ခုမှာ လုပ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ် ။ သူဝတ်စား ထားတာတွေ ကြည့်ပြီး အကို သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန် မှာ ဘ၀ရပ်တည် ဖို့ ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ ညီမလေးလည်း သိမှာပါလေ။ အိမ်ကို တစ်လ တစ်သိန်းကျော် ပြန်ပို့နိုင်တယ် ဆိုကတည်းက အထည် ချုပ် စက်ရုံ မဟုတ်နိုင်ပါဘူးကွယ်။ဒါနဲ့ အကိုစိတ်ကူးထဲ ရန်ကုန်ကို အရဲစွန့် အလုပ် သွားလုပ်တဲ့ ကလေးမလေး
တစ်ယောက်ကို မြင်ယောင် မိပြန်ပါတယ် ။
သူနာမည်က ဇာခြည် လင်းလဲ့ ။ရန်ကုန်မှာ ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင် သင်တန်း သွားတက်တယ် နောက်တော့ ဆေး ခန်းတစ်ခုမှာ သူနာပြု အကူ ရတယ် တစ်လ ငါးသောင်း လောက် လစာရတယ်လေ။
အဆောင်မှာ နေကြ ချက်ပြုတ် စားကြနဲ့ ညီမလေးရယ် ငွေ ငါးသောင်းဆိုတာ ဘာသုံးလို့ရနိုင်မှာလဲ။ နောက်တော့ အဆောင်က သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက်ဆီမှာ ပိုက်ဆံချေးသုံး မိန်းကလေးဆိုတော့ လှချင်ရှာတယ်လေ
အ၀တ်တွ အဆန်းအပြားတွေ ၀တ်ချင်ရှာတယ်။ဟို အမျိုး သမီးကလည်း လိုသလောက်ပိုက်ဆံ ထုတ်ချေးတာပဲကွယ် နောက်ဆုံး ငွေ ဆယ်သိန်းလောက်ရှိတော့ အတင်းတောင်းတော့တာပဲ ။ ညည်း ငါ့ လို နေချင်ရင်
ငါအလုပ် လုပ်ပါလား ဆိုပြီး မက်လုံးပေး စည်းရုံးတာပေါ့ ။ သူက ဘာလုပ်လည်း ဆိုတော့ အနိပ်ခန်းတွေမှာ လုပ်တာပါ အနိပ်ခန်းဆိုတာကတော့ အကိုလည်း တခါမှ မရောက် ဖူးသလို သွားဖို့ ဆိုတာ လည်း လုံးဝ မရှိပါဘူး။ တစ်ဆက်ရှင်း နှစ်ထောင့်ငါးရာ လောက်ရတယ် တဲ့ ။ ဒါက ဟန်ပြ ပါပဲ သူဋ္ဌေးတစ်ယောက်လောက်လာရင် အပိုင် ကိုင်ထားလိုက် သူတို့ အခေါ်ကတော့ ဖားတဲ့ ကွယ် ညည်းရုပ်နဲ့ သူတို့ နဲ့ တစ်နာရီလောက် နေလိုက်ရင် လို သလောက်တောင်းလို့ရတယ် ဘာညာ စည်းရုံးတာနဲ့ ဇာခြည် လင်းလဲ့လည်း အညံ့ ခံလိုက်ရရှာ တယ်ကွယ်။
ညီမလေးရေ ..နောက်… ဘ၀တွေ နွမ်းကြေ ခဲ့ရသူတွေအကြောင်း အကို တွေးမိရင်း ကြေကွဲ ခဲ့၇ပါတယ်။တခါတလေတော့ အိမ်ဖေါ်တွေ ဘ၀ပျက်သလို အိမ်ဖေါ်တွေကပဲ ရိုးသားတဲ့ အိမ်ရှင်တွေကို ဒုက္ခပေး
ခဲ့ကြတယ်လေ။တလောက အိမ်ဖေါ် အလုပ် လိုချင်လို့  အကို့ အသိတစ်ယောက်ကို ရန်ကုန်က အကူ အညီတောင်းယ်ကွယ်။ သူကလည်း တကယ် လုပ်ချင်တဲ့ အသက် ၁၈နှစ်လောက် ကောင်မလေးကို ရန်ကုန် ကို မိဘတွေ သလောတူညီမှုနဲ့ ပို့ပေးတယ် ။ကောင်မလေး အိမ်ကိုတော့ သုံးလစာ ငွေ ကြိုတင်ပေးခဲ့ရတယ်။ ကောင်မလေး ကရန်ကုန် အိမ်မှာ နှစ်ရက်လောက်နေပြီး ပြန်လာတယ်။အကို့ အသိအိမ်ကို လာပြီး ကလေးမလေးက မပျော်လို့ ပြန်လာတာ မဟုတ်ဘူး။ နိပ်စက်တာတဲ့ ညနေစာ ထမင်းမကျွေး ဘူး အခု ဗိုက်အောင့်ရောဂါ ရနေတယ် ဆိုပြီး ကြိုတင်ပေးငွေ မရတဲ့ အပြင် ထပ်ပေရမလို ပြောတော့ မိတ်ဆွေက အကိုဆီရောက်လာတယ်
ဘယ်လိုရှင်းရမလဲပေါ့ ။ သူ့ အသိအိမ်ကလည်း ကြိုတင် လစာတွေ ပြန်တောင်းနေတယ် ။ဒီမှာ အကို ကပြောလိုက်ပါတယ် ညိမလေးရယ်
“ မင်း သတိထားရမှာက တစ်ချို့က အလုပ် လုပ်ချင်တာ မဟုတ်ဘူး ရန်ကုန်ကို ရောက်ဖူးချင်တာ အသွားကို ကားခ မကုန်ဘူး စားစရိတ်မကုန်ဘူး
နေစရာမပူရဘူး နောက် တော့ ပြန်ာတာပဲ ကြိုတင် လစာလည်းရ ရန်ကုန်လည်းရောက်ဖူးတယ် ဒါကို မင်းက ပြဿနာလုပ်ရင် ကျမကို လူကုန်ကူး
တာပါ တာချီလိတ် ပို့မယ်လုပ်လို့ အတင်း ပြန်ပြေးလာတာ ဘာညာနဲ့ ရဲကို တိုင်ရင် ဒီထက် အဆပေါင်းများစွာငွေကုန် အလုပ်ရှုပ် အခိုက် မသင့်ရင်
ထောင်ကျနိုင်တယ်ကိုယ့်လူ လို့ ပြောလိုက်ရတယ်။”
ညီမလေးရေ ဒီထက် ကြမ်းတဲ့ အိမ်ဖေါ်ကတော့ အိမ်ရှင်ကို ရိတိတိလုပ် ရေလာမြောင်းပေးလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ အိမ်ရှင်က သူရဲ့ ထောင်ချောက်ထဲ ပါရင်တော့ လျှော်ပေတော့ သူညှိ နှိုင်း
သလို ပေးပေတော့ မဟုတ်လို့ကတော့ ၃၇၆/၅၁၁ နဲ့ ရဲ စခန်းရောက်ပြီသာမှတ်ပေတော့ ။ ဒါက အိမ်ဖေါ်ရဲ့ လုပ်စားချက်တွေပါ ညီမလေး။ ဒါပေမယ့် ညီမလေးရယ် လောက ထဲမှာ တကယ် အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့
ကြိုးစားတဲ့ အမျိုးသမီး အမျိုး သားတွေရှိနေပါတယ်။ ရိုးသားတဲ့ ဖြူစင်တဲ့ အလုပ်သမားကောင်တွေက ပိုများနေပါတယ်။သူတို့ရဲ့ မပြေ လည်မှုကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်း လမ်းရှာတဲ့နေရာမှာ ချွေး စက်တွေ ရိုးသားမှု လက်တွေနဲ့
လောက ကိုရဲဝင့်ချင်သူတွေရှိတယ် ညီမလေးရယ်။ဒါပေမယ့် အဲ့ ဒီ ရိုးသားသူတွေကို အနိုင်ပိုင်း ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာ ချင်သူတွေကြောင့် သူတို့ ဘ၀လေးတွေ ညှိုးနွမ်းခဲ့ရတယ် ။ အနိပ်ခန်းကိုရောက် တစ်နာရီ နိပ်မှ ငါးရာရ
နောက် အနိပ်ခန်ူးတွေပိတ်လို့ မလုပ်ရရင် လမ်းပေါ်ထွက် ကြုံရာ လူနဲ့ လိုက်ပြီး လိင်ပျော်ပါးမှုတွေနဲ့ ပန်းကောင်း အညွန့်ကျိုး ခဲ့ရတယ်။
ညီမလေးရေ အကို ဆူးလေနားမှာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို လာစောင့်ရင်း ကလေးမလေးတစ်ယောက်က မ၀ံ့မရဲ လာပြောပါတယ်။ ကျမကိုခေါ်ပါတဲ့ ။ အကို ဒေါသ ထွက်မိတယ် ညီမလေး နောက်
သတိပြန် ကပ်ပြီး သူမကို မေးမိတယ် မင်း က ငါ့ကို အပျော်ရှာတတ်တဲ့ လူလို့ ထင်နေတာလား ငါ့ပုံစံက ဒီပုံမျိုးပေါက်နေလား မေးမိပါတယ်။ အကိုရှက် လည်း ရှက် မိတယ် ညီမလေးရယ် ။ အကိုရဲ့ ဘ၀အရွယ်
ရောက်ကတည်းက သက်မွေး ၀မ်းကြောင်းမှု ဟာ ကျူရှင်ဆရာ ဆေးဆရာ ဘ၀လေ။ ဒီတော့ အကိုက စားတာနေတာ ထိုင်တာကစ သတိရှိနေရပါတယ်။ ဒါလည်း ကိုယ်ရည်သွေးပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး
ဒီမှာပဲ ကလေးမလေးက ဒီ သဘော မဟုတ်ပါဘူး မနက်စာရော ညစာပါ မစားရသေးလို့ပါ အချိန်က ည၉နာရီကျော်နေပါပြီ။ အကိုငွေ ၅၀၀၀တန်တစ်ရွက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကလေးမလေး စားချင်ရာ စားပါကွယ်
နောက် ဒီဘ၀မျိုးက လွတ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ ပဲပြောမိပါတယ် ကလေးမလေးက ကျေးဇူးတင်ကြောင်း နုတ်က ပြောပြီး မျက်ရည်တွေဝဲလို့ ထွက်သွားတယ်။
ညီမလေးရေ ဘ၀တွေ နွမ်းကြွေ သွားရတဲ့ သူတွေအတွက် အကို စိတ်မကောင်းပါဘူး ။ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်က စာပွဲထိုးလေး တစ်ယောက် အော်ဟစ် ဆူပူခံရတာတွေ လမ်းဘေး ပလပ်စတစ်ကောက်တဲ့ ကလေး
အော်ငေါက်ခံ မောင်းထုတ်ခံရတာတွေ သူတို့ရှာနေကြတယ် ဆာနေကြတယ် ညီမလေး။ ကန်စွန်းရွက် သည်မလေးကို တန်ရာတန်ကြေးထက် ဈေး ပို ဆစ်ဝယ်တာတွေ အကိုတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့ရရင်
ရင်နာမိပါတယ်။ နောက် ပိုက်ဆံ အစုတ်ကိုမှရွေးပြီး ကွမ်းယာ သည် နဲ့ ဆိုက်ကားသမားကိုပေးတာ ဒီလို စာနာမှုမရှိကြတာကို အံသြမိပါရဲ့ ။ အကိုကတော့ တောင်းစားတဲ့ သူကို ပေးရင်တောင် ပိုက်ဆံ အသစ်လေး
ညီမလေးရေ ဘ၀မနွမ်းဖို့အားထုတ်တဲ့ နေရာမှာ ဥာဏ် ဦးဆောင်ပါကွယ်။နောက် အားနည်သူတွေကို လည်း ဖေးကူပါလို့ အကိုပြောချင်ပါတယ်။ ဖြစ်တည်မှုလှပပြီး အိပ်မက်ဆိုးတွေ မခြောက်လှန့်နိုင်အောင်
တို့တွေ အားထုတ်လို့ အနာဂတ်လမ်းကို လျှောက်ကြပါစို့လို့ အကို ဆန္ဒပြု လိုက်ရပါတယ်။
လစာ ၅၀၀၀၀ ရတာလောက်အောင်သုံးပြီး ဘ၀ရပ်တည်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေရှိပါတယ်။
လမ်းစားရိတ် မကုန်တဲ့ အလုပ်နဲ့ မဝေးတဲ့ နေရာမှာတော့ရှာငှားနေရတာပေါ့။
ဆရာထက်စေတနာလေးတွေလည်း စာထဲကတဆင့် မြင်နေရပါတယ်။
စနစ်ကြောင့်မဟုတ် ကျင့်ဝတ်တန်ဖိုးတွေကြောင့်ဆိုရင် လူဖြူဂျင်းတူပါလျက် ပြုမူနေထိုင် စားသောက်ပုံဂျင်းတူပါလျက် သိပ္ပံနည်းပညာဂျင်း တူပါလျက် အစဉ်အလာ ကြီးမားဒါဂျင်း တူပါလျက် ရုရှားနိုင်ငံ ဘာဖြစ်လို့ ချွတ်ခြုံကျနေသလဲ သဂျီးစုတ်ရဲ့…။ :mad: လူဖြူအနောက်နိုင်ငံတွေ ချမ်းသာတိုးတက်တာ စနစ်ကြောင့် လူ့တန်ဖိုး အတွေးအခေါ်ဒွေဂဒေါ့ ကျန်တကမ္ဘာလုံးနဲ့ သိပ်မကွာဘူး။ စနစ်ကနေ လူဒေါ်လူဂေါင်းဒွေဂို မြေတောင်မြှောက်ပေးလိုက်ဒယ်..လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ စနစ်ကိုဖြစ်စေဒယ် အာမခံချက်ရှိဒဲ့ ဘဝကိုဖန်တီးပေးဒယ်..တီထွင်ဖန်တီးမှု စွမ်းပကားကို မြှင့်တင်ပေးဒယ်…ကျန်သာမာန်လူအများစုဂို နောက်ကနေလိုက်စေတယ်..လူမှန်နေယာမှန် ဖြစ်စေဒယ်..။
တဦး.. တဦးချင်းစီတို့ရဲ့.. ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်.. ဆိုတော့…
ဓလေ့၊ ထုံးစံ..အတွေးအခေါ်.. ဘာသာရေးကနေ..အထွေထွေ..တော်လှန်ရေး.. ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ရမယ်ထင်ပါကြောင်း…
ကျုပ်ပြောတာ.. အဖမြေ.. မြန်မာပြည်အတွက်ပဲ..
ဘယ်က.. ရုရှားဆွဲထည့်ရသလည်း.. :?
ကွန်ဆာဗေးတစ်လွန်းလို့.. “အစ်”နေတဲ့.. မြန်မာပြည်အတွက်ပြောနေတာတွေဖြစ်ပါကြောင်း..
ရုရှားမထည့်ရရင် ဂျာမန်ဂို ထည့်မယ်ဗျာ.. ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး စစ်အေးတိုက်ပွဲမှာ ဆိုဗီယက်နဲ့ အမေရိကန် ဂျာမနီဂို အရှေ့အနောက် နှစ်ပိုင်းခွဲဂျဒေါ့ ဘယ်အပိုင်းဂ လူနေမှုစနစ် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု မြင့်သလဲ။ ၁၉၉၀ခုနှစ် ဘာလင်တံတိုင်း ဖြိုချလိုက်ပြီး ဒီမိုကရေစီ အနောက်ဂျာမနီဂ ကူမြူနစ်အရှေ့ဂျာမနီကို ဝါးမြိုလိုက်မှ အရှေ့အနောက် မကွဲတိုးတက်သွားတာမဟုတ်လား။ လူမျိုး ထုံးစံ အပြုအမူ အစားအသောက် အားလုံးတူပါလျက် စနစ်ကြောင့် တိုးတက်မှု ကွာဟရဒယ် မဟုတ်လား။ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ တောင်ကိုရီးယားလည်း ဒီသဘောဘဲ။ ကြေးမုံဂျီးအမျိုး တရုတ်ပြည်နဲ့ပေါင်းဒဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ဘာဖြစ်နေသလဲ… သူတို့ညံ့လို့လား မဟုတ်ဘူးနော်.. အာရှတိုက်မှာ အကြီးမားဆုံး စစ်တပ်ရှိဒယ်၊ သိပ္ပံနည်းပညာ ထိပ်တန်းမှာပါဒယ်။ သို့ပေမဲ့ ဘာလို့ငတ်နေလဲ… နိုင်ငံရေး အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ကြောင်ပေါ့ဗျာ..။ နိုင်ငံရေးဆိုဒါ အားလုံးရဲ့ အထွတ်အထိပ်ပဲ.. သူမှန်ရင် ကျန်အားလုံး သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ လိုက်မှန်ဒယ်။ အခြားမကြည့်နဲ့ တူရကီနိုင်ငံကိုကြည့်.. အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ် အားကောင်းတော့ တိုးတက်တယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာ မထွန်းဂါးဘူး မငြင်းနဲ့…။ လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေဒါ ဘာသာရေး အခြေခံဒဲ့ပါတီ..။ နိုင်ငံရေးစနစ် တဂယ်ပြောင်းရင် အုပ်ချုပ်ရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး ဘာသာရေး ကျင့်ဝတ်ထုံးစံ အတွေးအခေါ် အပြုအမူ အားလုံးအပေါင်းသဘောဆောင် ပြောင်းဒယ်..။ အဲဒါကို စနစ်ပြောင်းဒယ်ခေါ်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် အကြောင်းဖြစ်တယ်..။ သဂျီး နွာကင်တဖြဲနှဖြဲစာ ဘီယာမူးပြီးပြောနေတာ အကျိုးဂျီး..။ အကြောင်းပြင်မှ အကျိုးမှန်ဒယ်…။ ကိုဘေးနွားကင် ကောင်းကောင်းစားဂျင်ရင် နွားမွေးဂထဲဂ ဂျပန်ဘီယာတိုက်ရဒယ်..။ သတ်ပြီးမှ ဘီယာစိမ်လို့ မကောင်းဘူး..။
ဒေါက်တာ ဒေါ်padonmar ခင်ဗျား
အခုလိုပြောပြ လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ရွာ ထဲ ပြန်ဝင်တဲ့ အခိုက် မအား လပ်တဲ့ ကြားက
ကျွန်တော့် ဆောင်းပါး အပေါ် ၀င်ရောက် ရေးပေးတာ လေးစားမိပါတယ်။
ဒေါက်တာ ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ လို့ မေတ္တာ ပို့ပါတယ်။
အင်း ပြောရရင်တော့ (ဆရာမကြီးလေသံဖြင့်) (အမှန်တော့ ဘာမှသိတာမဟုတ်)
ဒီလို ညီမလေးတွေကတော့ ရန်ကုန်မြို့တက်လာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ရန်ကုန်မြို့မှာလည်း ဒုနဲ့ ဒေးပါပဲ။ တချို့ကျပြန်တော့ ခေတ်စနစ်ကို အကြောင်းပြုပြီး ဒီလိုပေါ့။ အမှန်တော့ ခေတ်ကြောင့်လည်း မဟုတ်ဘူး စနစ်ကြောင့်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်နေထိုင်ကြီးပြင်းရာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား နဲ့သာ သက်ဆိုင်ဆုံးပါပဲ။ လူဆိုတာကလည်း ဘယ်သူပြုပြု မိမိမှုဆိုသလိုပေါ့ စီးပွားရေးလည်း အဆင်မပြေတာလေးကို ယိုးမယ်ဖွဲ့ပြီး ငွေရလမ်း ရပေါက်ရှာသွားသူတွေလည်း ရှိရဲ့ တချို့ကျတော့လည်း လွယ်လွယ် တန်ဖိုးကို ဖျက်စီးကြတာပေါ့လေ။ ဒီလိုပြောခဲ့မိလို့လည်း တချို့က ပြောတယ် ဒေါ်မနောလို စာလေး မတောက်တခေါက် ရေးတတ်သူတွေကတော့ ပြောအားရှိတာပေါ့လေဆိုပြီး အပြောခံခဲ့ရဖူးတယ်။ ပြောရရင် အများကြီးပါပဲလေ.. နောက်မှ ဆက်ဆွေးနွေးဦးမယ်။
ဆရာမ မနောဖြူလေး ခင်ဗျား
ကိုယ့် အမြင်ကို လွတ်လပ်စွာပြောသွားတာ ကျေးဇူးပါ
စနစ် တခုလို့ ကျွန်တော်က ဆိုထားပါတယ်
စီးပွားရေး မပြေ လည်မှုတွေ ရဲ့ ဖိနိပ်မှုအောက်မှာ( အများစု ကို မဆိုလို)
စာရိတ္တ ပျက်ခဲ့ရတာလို့  ထင်မိပါတယ်။
ဆရာမလေး ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေလို့ မေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။
ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ဖတ်ပြီးအားပေးသွားပါတယ် ဆရာထက်ခင်ဗျာ..
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေဆိုတော့ ပြောရတာခက်သားလား..
ဆရာထက်ရေ ………. ညီမဆရာထက်ပို့စ်လေးကိုတွေ့ပါတယ် ဒါပေသည့်နေမကောင်းဖြစ်နေတော့ သေချာမဖတ်နိုင်ခဲ့လို့မမန့်ခဲ့ရဘူး ……
ညငှက်လေးတွေရဲ့ဘ၀က တစ်ခါတစ်လေသနားစရာသိပ်ကောင်းပါတယ် …… ညီမတွေ့ဖူးတဲ့ ညငှက်မလေးဘ၀ဆို သနားစရာကောင်းပါတယ် သူ့အဖေကဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းတောင် သူမသိတဲ့ဘ၀ သူ့က ညငှက်အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်ရှာဘူး အဲဒါကို သူ့အမေကမလုပ်ရင် ငိုယိုတယ်တဲ့ သူမအမေယူထားတာ သူမအဖေကောဟုတ်ရဲ့လားလဲမသိ သမီးဖြစ်သူက ညငှက်လုပ်စားနေတာကို အဖေက အေးဆေးအိပ်မှာ ထိုင်စားနေတယ်လေ သမီးဆိုလို့သူတစ်ယောက်တည်းရှိတာပါ အဖေရောအမေရောက ကျန်းကျန်းမာမာပါပဲ အခုဆို သူမအဖေက ရပ်ကွက်မှာ လူကြီးတောင်ဖြစ်နေတယ်လေ …… တစ်ခါတစ်လေ သူမကပြောတယ် တစ်ခြားလူတွေလို သင်တန်းတွေတက် နေ့ဘက်မှာ လူမြင်သူမြင်လျှောက်သွားချင်တယ်တဲ့ သူတို့ဘ၀ကလူတောမတိုးရဲတဲ့ဘ၀ပါတဲ့လေ …… ဒီလိုမဖြစ်ချင်ဘဲဖြစ်နေရတဲ့ ညငှက်လေးတွေရော ဘယ်လောက်တောင်များနေလဲမသိဘူးနော် ………
ဆရာထက်ဝေးရဲ့စာတွေက သတိတစ်ရားနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အလွန်ကို တန်ဖိုး
ရှိပါတယ်ဆရာရေ….. ဘ၀မှာ စိတ်ထားကောင်းပြီး မွန်မြတ်ဖို့ ကျင့်ကြံနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။
မိန်းကလေးတွေ ပန်းကောင်းအညွှန့်ကျိုးရတာ အဓိကကတော့ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ရပ်တည်လို့ရတာထက်
လွန်ကဲသုံးစွဲပြီး လှချင်တာကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်။ လွယ်လွယ်ရတဲ့လမ်းပေါ်ကိုလိုက်တာပေါ့နော်။
သူတို့ထက်စာရင် ဈေးတောင်းခေါင်းရွက်ပြီး ရိုးရိုးသားသားရှာစားနေတဲ့ မိန်းကလေးကိုပဲလေးစားပါတယ်။
KTV တို့ မာဆတ်တို့မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ဟန်းဖုန်းနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာတောင် မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး
ဘယ်သူ့ကိုမှဂရုမစိုက်တတ်တဲ့ အရှက်မဲ့မိန်းကလေးများကိုတော့ အထင်မကြီးနိုင်ပါဘူး။ ရိုးရိုးသားသားရှိတာနဲ့ ရောင့်ရဲ
ဆရာရွာ စားကျာ် ဆရာမ ခိုင်ခိုင် ၊ဆရာမPhaung Phaung
ကျွန်တော် စာကို ဖတ်ပြီး ဝေဖန်တာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
“ တစ်ခါတစ်လေ သူမကပြောတယ် တစ်ခြားလူတွေလို သင်တန်းတွေတက် နေ့ဘက်မှာ လူမြင်သူမြင်လျှောက်သွားချင်တယ်တဲ့ ”
ဆရာ မ ခိုင် ခိုင် ရဲ့ စာသားကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော် ခံစား မိပါတယ်။
ဒီ စာသာကတော့ လူသားပီသစွာ ပီတိ ကိုဖြစ်စေမိပါတယ် ။ခွန်အား ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် ဆရာမ။
နီရဲတွတ် နေတဲ့ ကွန်းမန့်တွေက
ဆရာထက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ဖေါ်ပြနေကြပါတယ်။
စိတ်ဝင်တစား အနီကဒ်တွေချီးမြှင့်နေတယ် ဆိုကတည်းက
ဆရာထက်ပို့စ် က အောင်မြင်နေပါပြီဗျာ။
ညီမလေးပို့စ်တွေ ဆက်ရေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဗျာ။